Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: भविष्य नभएको कांग्रेस र 'लिङ्ग' नछुटिएको एमालेले के गर्लान्?
सान्दर्भिकता जोड्न सकेको छैन। बाबुराम भट्टराई अरु राजनीतिज्ञ भन्दा कुनै रुपमा फरक देखिन सकेनन्। तर शायद उनले भनेको एउटा कुरा एमालेले गर्नै पर्छ होला आफ्नो अस्तित्वको सान्दर्भिकता सावित गर्न। उसले आफ्नो 'लिङ्ग' के हो खुलाउनै पर्ने भएको छ राष्टिय राजनीतिमा। भविष्य नभएको कांग्रेस र 'लिङ्ग' नछुटिएको एमालेले मुलुकमा के गर्लान्? तर एमालेले भट्टराईको कुरा मानेमा तथा कांग्रेसले आफ्नो भविष्यको सान्दर्भिकता स्थापित गर्ने कोसिस गरेमा त्यसले माओवादीको राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ नै। नत्र अहिले जतिसुकै मच्चिए पनि अन्ततोगत्वा एमाले र कांग्रेससमक्ष माओवादीको एजेन्डामा ल्याप्चे लगाउने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अन्यथा गर्ने सामर्थ्य उनीहरूमा छैन। यो २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि स्पष्टसँग देखिएको परिणाम हो। त्यो नै नेपाली राजनीतिको अहिलेको विडम्बना हो। राजनीतिक दल र नेताहरूमा 'चरित्रको अन्त्य' नै नेपालको लागि क्यान्सर बन्न पुगेको छ, अहिले। सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेरदेखि नेपाली कांग्रेस आफ्ना अतीतसँग काटिएका छन्। उनीहरूले माओवादीको आलोचना गरे जस्तो गर्नै पर्छ, तर माअेावादीको एजेन्डा बाहिर जाने साहस छैन। हिजोको पहिचानको मौलिकतासँग नाता तोडेपछि आजका पुस्ताले पनि उनीहरूलाई विश्वास गर्दैन। किनकि राजनीतिमा खासगरी नेतृत्वमा 'चरित्र' आवश्यक हुन्छ। त्यो चरित्रसँग राजनीतिक 'भिजन', मुलुक डोर्यावउने क्षमता, परेमा एक्लै उभिने साहस आफ्ना लागि भन्दा मुलुकका लागि जिउँदो रहेको प्रमाण आदि आवश्यक छ। १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको मुलुकमा विद्युत प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा कार्यकारीको छनौट प्रक्रिया अपनाए पनि कोही योग्य व्यक्ति नआए जस्तै मुलुकमा नेतृत्वको खडेरी पनि साँच्चै परेको छ। चरित्र नबोकेका या गुमाएका नेताहरूको भविष्य छैन। र दुर्भाग्य! विकल्पका रुपमा देखापरेको माओवादी नेतृत्वको तुलना 'भ्रष्टतम्' नेताहरूसँग हुन थालेपछि जनताको बीचबाट नेतृत्वको खोजीको संभवतः यो सवभन्दा उचित अवसर सावित हुनेछ।-साँघु
Posted by www.Nepalmother.com at 7:23 PM